Navoaka ny kinova Proton 4.2-4 vaovao miaraka amin'ny DXVK 1.1.1 sy maro hafa | Avy amin'ny Linux
Navoaka ny kinova Proton 4.2-4 vaovao miaraka amin'ny DXVK 1.1.1 sy maro hafa
Andro vitsy lasa izay Valve dia namoaka ny kinova vaovao an'ny tetikasa Proton 4.2-4, izay mifototra amin'ny asan'ny tetikasa divay ary mikendry ny hiantohana ny fandefasana ny rindranasan'ny lalao Linux noforonina ho an'ny Windows ary asongadina ao amin'ny katalaogin'i Steam.
Ny fivoaran'ny tetikasa dia zaraina eo ambanin'ny fahazoan-dàlana BSD. Raha vantany vao vonona izy ireo dia entina mankany amin'ny tetikasa divay tany am-boalohany ny fanovana natao tao Proton ary amin'ireo tetikasa mifandraika amin'izany, toy ny DXVK sy vkd3d.
1 Momba an'i Proton
2 Inona no vaovao ao amin'ny Proton 4.2-4?
3 Ahoana ny fomba hampiasana Proton amin'ny Steam?
Momba an'i Proton
Proton mamela anao mihazakazaka fampiharana fampiharana izay tsy misy afa-tsy amin'ny Windows mivantana amin'ny mpanjifa Linux Steam.
fonosana misy ny fampiharana DirectX 10/11 (mifototra amin'ny DXVK) sy 12 (mifototra amin'ny vkd3d), miasa amin'ny alàlan'ny fandikana ny antso DirectX mankany amin'ny Vulkan API, dia manome fanohanana nohatsaraina ho an'ireo mpanara-maso ny lalao sy ny fahaizana mampiasa maodely efijery feno, tsy miankina. fanapahan-kevitra momba ny efijery tohanan'ny lalao.
Raha ampitahaina amin'ny tetikasa divay tany am-boalohany, fampisehoana lalao marolafy dia nitombo be misaotra ny fampiasana ny patch »esync» (Eventfd Synchronization).
ankehitriny ny sasany amin'ireo lalao sy fampiharana izay efa nosedraina ary mandeha tsara momba ity tetikasa ity dia:
DOOM II: Helo ety an-tany
FANTASY FANTASY VI
Magic: The Gathering - Duels an'ny Planeswalkers 2012
Magic: The Gathering - Duels an'ny Planeswalkers 2013
Mount & Blade: Miaraka amin'ny afo & sabatra
FAHAGAGANA: Aloky ny Chernobyl
Star Wars: ilay ady 2
Warhammer 40,000: Dawn of War - Crusade mainty
Inona no vaovao ao amin'ny Proton 4.2-4?
Amin'ity famoahana vaovao an'ny Proton 4.2-4 ity asongadiny fa ny sosona DXVK (Fampiharana DXGI, Direct3D 10 ary Direct3D 11 eo ambonin'ny Vulkan API) nohavaozina amin'ny kinova 1.1.1, izay manampy fanampiana amin'ny fametrahana shaders amin'ny fahatsiarovana voafintina sy fampitomboana ny fahombiazan'ny lalao isan-karazany, indrindra ireo mifototra amin'ny Unreal Engine 4.
koa fianjerana raikitra rehefa mandefa lalao RAGE 2 (Mba hiasa amin'ny rafitra misy AMD GPUs, ilaina ny fampiasana kinova fanandramana vaovao an'ny Mesa).
El nohatsaraina ny fanohanana ny fiaraha-miasa amin'ny Vulkan graphics API ary koa ny mifanentana amin'ny lalao No Man's Sky.
Ny fiovana kely tsy azontsika lavina dia ireo sary namboarina nohatsaraina ho an'ireo mpitantana varavarankely sasany.
Fiovana hafa miavaka amin'ity famoahana vaovao ity dia:
Namboarina bibikely izay nahatonga ny fizotran'ny divay raha nanamboatra ny dikan-teny Proton
Ny olan'ny famaritana ny lalao amin'ny lalao Yakuza Kiwami sy Telltale
Bibikely raikitra noho ny endrika tsy nahomby tamin'ny lalao Space Engineers
Raikitra ny fianjerana rehefa manomboka ny lalao voninkazo.
Ahoana ny fomba hampiasana Proton amin'ny Steam?
Raha liana amin'ny fanandramana izay atolotry ny tetikasa Proton amin'ny distro Linux tianao ianao, ny hany fepetra takian'izy ireo dia ny mametraka ny kinova beta an'ny Steam Play ho an'ny Linux na hidira amin'ny Linux beta avy amin'ny mpanjifa Steam (raha efa manana etona napetraka ao amin'ny rafitrao ianao).
Afaka mifamadika amin'ny kinova Beta an'ny Steam, dTsy maintsy manokatra ny mpanjifan'ny Steam amin'ny rafitrao ianao ary tsindrio ny menio Steam eo amin'ny zoro havia ambony ary avy eo dia Configuration.
Ao amin'ny fizarana "Kaonty" dia hahita ny safidy hisoratra anarana amin'ny kinova beta ianao. Ny fanaovana izany sy ny fanekena dia hanidy ny mpanjifa Steam ary hampidina ny kinova beta (fametrahana vaovao).
Amin'ny farany ary aorian'ny fidirana amin'ny kaontiny dia miverina amin'ny zotra mitovy ihany izy ireo hanamarina fa efa mampiasa Proton izy ireo.
Azonao atao izao ny mametraka ny lalao tsy tapaka, hampahatsiahivina anao amin'ny fotoana tokana izay nampiasana Proton ho azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Navoaka ny kinova Proton 4.2-4 vaovao miaraka amin'ny DXVK 1.1.1 sy maro hafa
Intel dia manolotra ny Cloud Hypervisor sy ModernFW ao amin'ny OSTS
Loharano mivelatra hanombohana ny feon'ny kintana